Teknụzụ maka ire ahịa nke ọma | Martech Zone
N'ụwa nke taa, teknụzụ na nkwado ahịa na-aga ụkwụ na ụkwụ. Ọ dị oke mkpa na ị na-enyocha ihe omume nke olile anya gị iji mee ka ha tozuo oke dị ka ndu ọkụ ma ọ bụ nke dị nro. Kedu ka atụmanya ga-esi na akara gị? Ha na mmekọrịta gị na ika gị? Kedu ngwá ọrụ ị na-eji iji soro nke a?
Anyị na-arụ ọrụ ire ahịa onye nkwado, TinderBox, iji mepụta infographic banyere ngwaọrụ na usoro dị iche iche nke ụlọ ọrụ na-eji iji tozuo ma soro ụzọ. Agbanyeghị na olulu ahịa na-agbanwe, a ka nwere ụfọdụ ụzọ dị iche iche n'oge azụmaahịa ahụ: Marketingzụ ahịa & Ọrịre, schọpụta Ihe, ualtọzu, Nkwenye, Mkparịta ụka na acgagharị. Usoro nwere ike ọ gaghị abụ n'usoro, mana usoro ndị a dị mkpa iji mechie ahịa.
N'ime ngwaọrụ ndị a, ị na-eji ibelata usoro ahịa gị? Kedu ka ị si eke ohere maka ndị otu gị gbasara ike ahịa? Iji ezigbo ngwá ọrụ ga-enyere gị aka inwe "ahịa gold."
“N’ime ihe ndị a, olee nke ị na-eji ebelata ihe ị na-ere? Kedu ka ị si eke ohere maka ndị otu gị gbasara ike ahịa? Iji ezigbo ngwá ọrụ ga-enyere gị aka inwe "ahịa gold."
Enweghị m ike ikwenye gị karịa. Iji ezigbo ngwaọrụ - m ga-ekwukwa na iji ha nke ọma - nwere ike ịchekwa gị oge dị ukwuu ma mee ka ọrụ gị dịkwuo irè. Agbanyeghị, nsogbu dị na nke a bụ na ọtụtụ ndị enweghị ike iji ngwaọrụ ndị a ma ọ bụ na ha na-eji ha enweghị isi.
Daalụ maka okwu gị, Anne! Ekwenyere m gị. Echere m na iji ngwaọrụ rụọ ọrụ nke ọma bụ nsogbu n'oge a - ndị mmadụ na-adọpụ uche ma ọ bụ na-ewe oge iji mụta. Ya mere, ị nwere ike ida ọtụtụ ohere dị iche iche.
ya jenn iji ngwaọrụ nke ọma bụ nnukwu ihe ugbu a, nkọwa mara mma tanq
Ọ masịrị m otú DK New Media bụ a onye òtù ọlụlụ na Tinderbox na infographic na-atụ aro Tinderbox 300% karịa ihe ọ bụla ọzọ na ngwá ọrụ na ebe a. M na-eche ọtụtụ ngwaọrụ ndị ọzọ dị ebe a nwere mmekọ DK New Media na Tinderbox. Ọ bụ ihe karịrị akarị na-atụ anya inwe echiche zuru oke banyere sọftụwia na ire ahịa anyị nwere?
Nnamdi Nwachukwu (@nkechukwunyere)
Sep 22, 2014 na 11: 16 AM
M hụrụ n'anya infographic, Jenn. Emechara nke ọma – opekata mpe si n’aka mmadụ n’abụla abụọ nke usoro achọrọ. Ekwenyere m na ihe ndị a kwuru - ndị mmadụ na-apụtakwa na usoro nkuchi maka ngwaọrụ ndị a.
Sep 22, 2014 na 11: 22 AM
Daalụ, Brian! Enwere m ekele maka echiche gị. Echere m na e nwere ọtụtụ ngwaọrụ n’ebe ahụ na ọ siri ike ịmata ihe ị na-achọ ma ọ bụ ihe ha ga-eji maka ya. Nke ahụ ga - abụ ihe dị mkpa iji chee echiche site na njirimara, ebe ụlọ ọrụ kwesịrị inwe ike ịkọwapụta ihe ha nwere ike / kwesịrị iji. Na, n'akụkụ nke ọzọ nke mkpụrụ ego ahụ, ndị ọrụ kwesịrị ịma ihe ha chọrọ ka ha wee ghara itinye ego na ihe na-agaghị akwado ihe mgbaru ọsọ ha na mbụ.